केटा-केटीहरुमा टाउको दुख्ने समस्या- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
शरीरमा पसिना किन आउँछ ?
जेष्ठ ३१, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — शरीरबाट पसिना निस्किनु एक स्वभाबिक प्रक्रिया हो । यसले शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्दछ र स्वच्छ वायु शरीरमा पुर्‍याउँछ । पसिनाको माध्यमबाट शरीरभित्र भएको बिकार बाहिर आउँछ । शरीरबाट पसिना निस्केन या कुनै कारणवस पसिना भित्रै रोकिन गयो भने जसको फलस्वरुप कैयौं प्रकारका शारीरिक रोगहरु उत्पन्न हुनसक्छ ।
पसिनाको गन्धः शरीरबाट निस्केको पसिना यदि वाष्पिकरण (वाफ) भएर जान सकेन भने पसिना गन्हाउन थाल्छ । शरीरको बाहिरी भागमा मृत छालाको पत्र हुन्छ, धैरेपसिना आउनाले छालाको पत्रलाई ओसिलो बनाउँछ । ओसिलो ठाउँमा ब्याक्टेरियाहरुले हुर्किने अनुकुल वातावरण पाउने हुँदा त्यहाँ चाँडै दुर्गन्ध उत्पन्न हुन्छ । साथै पसिना सुकेपछि व्यक्तिले लगाएको लुगामा विभिन्न प्रकारका सेतो, पहेलो, रातो, कालो, टाटेपाटे पसिनाका दागहरु बस्न थाल्छ । कतिपय व्यक्तिको पसिनामा दुर्गंन्ध पनि धैरै हुन्छ । मुख गन्हाउने व्यक्ति वा शरीर गन्हाउने व्यक्तिलाई आफैंबाट दुर्गन्ध आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन । सँगै बस्ने, सँगै हिँडने सहयात्रीलाई त्यो दुर्गन्ध खपिनसक्नु हुन्छ । जसको कारणले गर्दा व्यक्तिले सार्वजनिकस्थल, सभा-गोष्ठि र साथीभाइ माँझमा बस्दापनि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तै गर्मीमा अत्यधिक पसिना निस्किने कारणले कतिपयलाई दैनिक कामकाज गर्नको लागि समेत अप्ठ्यारो हुन्छ । यसअर्थ बढी पसिना आउनेले नियमित रुपमा आफ्नो शरिरको सरसफाईमा ध्यान दिएन भने किटाणुहरु हुर्किन पाउँछन् र जीऊ चिलाउनुका साथै घाउखटिरा आउने हुन्छ।
उपरोक्त होमियोप्याथिक औषधिहरुको प्रयोग आफ्नो नजदिकको कुनै प्रशिक्षित योग्य तथा अनुभवी चिकित्सकसँग परामर्श लिइ गरेमा लाभदायक हुने छ । अस्तु ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ १४:२९